ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဟောပြောလော့။ တဦးတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဟန်ဆိုတဲ့အချက်ကို, ဒီအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှနက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ခက်ခဲ ဆက်ဆံ သငျသညျကိုသူကအမူအကျင့်တစ်ခုဘုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအာရုံစိုက်မှု၏လက္ခဏာသက်သေရှိပါတယ်ရှိမရှိထွက်တွက်ဆလို့မရပါဘူးတဲ့အခါမှာလူတယောက်သည်နှင့်အတူ။ အဲဒါကိုပုံရပေမည်ကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးကဲ့သို့ပရောပရှိမရှိသင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မနားလည်လာ, ကလွယ်ကူပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ဘာသာစကားကိုဖတ်နိုင်လိမ့်ဖို့အဓိကအရာ။
အကြည့်။ သင်တစ်ဦးသည်လူကိုကြိုက်? ထိုအခါသင်သည်အမြဲတစေအကြှနျုပျကိုသူ၏မျက်စိမခံစားရလိမ့်မည်ဟုအံ့အားသင့်ဖြစ်ပါဘူး။ လူတို့သညျသူတို့၏မျက်စိနှင့်အတူကိုချစ်ကြောင်းမေ့လျော့မနေပါနဲ့, ဒါပေမယ့်သင်ကြည့်ရှုဖို့၌မွေ့လျော်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား,
ကြွား။ စကားဝိုင်းမှ tete-a-tete စဉ်အတွင်းသူသည်သင်တို့ကိုအထင်ကြီးဖို့, တနည်းအား၎င်းတို့၏ထောက်လှမ်းရေး, ခွက်ကိုပြသသည်လမ်းအတွက်ကြိုးစားပါတယ်။ Baron Munchausen တစ်ဦးပုံပြင်, ဒါပေမယ့်လုလင်ငြိုးမထှကျဘဲမုသာစကားကိုခဲ့သည် - ဟုတ်ပါတယ်, ရေတွင်းတစ်တွင်း-ဖွံ့ဖြိုးပြီးပင်ကိုယ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုချက်ချင်းသူ၏ပုံပြင်များအများစုနားလည်သည်။ သူကပဲသင်၏မျက်စိ၌ကောင်းသောကြည့်ဖို့လိုသည်။
အပြုံး။ မိမိနှုတ်ကိုအတူစကားလက်ဆုံစဉ်အတွင်းအပျော်အပျက်အပြုံးဆင်းဘဲနေရသနည်း သူသည်သင်တို့နှင့်အတူပရောပမှစတင်သည်လျှင်ထိုမှတပါး,, ကသင့်ထံမှမျက်စိယူသှားဖို့မဝေးနိုင်သမျှရှာပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်ပင်ဒီအကောင်လေးမျက်စိ၎င်း၏ကျက်သရေနှင့်အလှအပနှင့်အတူသငျသညျဗဒေဖို့ဆုံးဖြတ်သောအထင်အမြင်မပေးပါဘူး။ လုလင်တစ်ဦးအမျိုးအစားလည်းမရှိပေမယ့်သူတို့, ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ဦးအပြုံးများနှင့်အတူပရောပရည်နေစဉ်အတွင်း, ကွာကြည့်, သူတို့ရဲ့ပါးရေလွှမ်းမျက်နှာမပျက်။
လပ်ြရြားမြ။ လူတပရောပနေသည်ကိုအောက်ပါ၏အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်: အဖြစ်မကြာမီသင်က "otzerkalivaet" သင်၏လှုပ်ရှားမှုနဲ့တူကြောင်းမြင်သည်အတိုင်း, သင်သိသူသည်သင်တို့ကိုခံစားရှာတတ်၏။ ဒါဟာဆပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ် အာရုံစူးစိုက်မှုကို သူသည်မိမိလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရှိရာရန်။ အကယ်. မိမိအခါးပတ်၌သင်တို့၏တင်ပါးသို့မဟုတ်လက်မ, ဒီလမ်းအတွက်၎င်းတို့၏ Self-ယုံကြည်မှုသရုပ်ပြ, ထို့နောက်သင်သူ့ကိုမှလစျြလြူရှုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ။
ကျောင်းသားများ။ မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များကျနော်တို့ကိုအလိုအလျောက်ကျနော်တို့မကြိုက်ဘူးသောအရာကိုကြည့်ရှုသောအခါအကျောင်းသားများ dilate ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုရှာဖွေရာတွင်နှင့်ငါတို့သာယာသောလူတွေကိုစပ်လျဉ်း။ သင်နှင့်အတူပရောပစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့စကားစဉ်အတွင်းသူ၏မျက်စိသို့ကြည့်ရှုပါ။
မျက်ခုံး။ Mimicry လူတစ်ဦးကသူ၏ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းအများကြီးပြောပြနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စကားပြောဆိုမှုစဉ်အတွင်းသူဟာမကြာခဏသင့် cue တုံ့ပြန်ချစ်စရာအပြုံးမေ့လျော့မပေး, သူ့မျက်ခုံးပေါ်ပေါက်? ဒါဟာသူကယ့်ကိုသငျနှငျ့အတူပရောပရည်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
နှုတ်ခမ်း။ ပြီးသားဖော်ပြထားသောအပြုံးအကြောင်း။ အရေးကြီးအချက် - သည် Periodic ကိုက်မိမိနှုတ်ခမ်းကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကသူအတော်လေးမတော်တဆမှုကြောင့်မထင်ရပေလိမ့်မည်။ မိမိအမသိစိတ်တစ်ပိုင်းရှင်းလင်းစွာကသူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကြောင်းကိုပြောသောပေမယ့်။
ပြိုင်ပွဲ။ သင့်ကုမ္ပဏီပြိုင်ဘက် join ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်ဆိုပါက, စင်စစ်ပရောပရည်နေတဲ့လူကိုသင်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းတစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်ကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ကြိုးစားပါ။
လူတ flirts, ဒါပေမယ့်ခြေလှမ်းများအောင်မပါဘူးဆိုရင်?
သငျသညျပြီးသားကောင်လေးသင်နှင့်အတူပရောပရည်ဖြစ်ပါတယ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့်သင်ဤနှင့်ကြီးစွန်းပေါ်တွင်သာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အဘို့အအမည်မသိအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ထို့နောက်သူကသင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုမရခြင်းမှာအကြောင်းများစွာရှိပါသည်တစ်ခုခုသို့လှည့်ပြီဆိုပါက ပို။ အသုံးအများဆုံးရှင်းလင်းချက်တစ်ခုမှာ - သူသည်မိမိအမဆုံးဖြတ်ခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်အတိအကျသင့်ရဲ့အပြုအမူ, မုသာငြင်းပယ်ခံရဖို့ချင်ပါဘူး, အစောပိုင်းကစကားများကဆိုသည်။
အဘယ်ကြောင့်အခြားသူများနှင့်ပရောပမှ likes သူတစ်ဦးသည်လူဖြစ်သနည်း
ပရောပ - ကဂိမ်းတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ အဘယ်သူ၏နှလုံးရှည်လျားအလုပ်ထားပြီးလူငယ်တစ်ဦးဦးကိုအခြားမိန်းကလေးများနှင့်အတူပရောပဆက်လက်ပါကဒီလုပ်ရပ်အားဖြင့်သူကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုဖယ်ရှားပစ်ရရန်ကြိုးစားသည်ဟုယူဆရသည်။
ယောက်ျားသည်မိန်းမလိုသည်ဆိုပါက - အရိပ်လက္ခဏာ
Intracranial ဖိအား - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
ကြော်စား pies များအတွက်အလွန်အရသာရှိတဲ့ဆေးမုန့်စိမ်း
ဘလက်ခ်ဘယ်ရီ - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Cossacks ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အိမ်မှာစပျစ်သီးစပျစ်ရည်ကို "Isabella" - ချက်ပြုတ်နည်းများ
တစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဗီဒီယိုမဂ္ဂဇင်းမေတ္တာတော်၌တည်ကိုယ်ဝန်ဆောင် Irina Shayk